Ducada Sweet ee Cadastre - Geofumadas
Oktoobar, 2007 cadastre, Maamulka Land
Tani waa mawduuca DVD oo uu ii dhiibay Diego Erba Ka dib wareysi ka dib waqti ka hor intii uu booqasho ku joogay Honduras. Mawduucani waa mid aan la hubin, hase yeeshee, waa wax macquul ah in la maqlo, iyo in la arko tan iyo inta ay yihiin fiidiyowyo aad u fiican.
Waxa ka mid ah waxa ku jira:
Cadastar Dhulka; fikradaha iyo horumarinta
Caddeynta dhulka iyo suuqyada aan rasmiga ahayn
Cadastar Dhulka iyo Canshuurta Hantida
Cadastar-dhuleed iyo hantidii caasimadda
Cadaalad-darrada iyo Qorsheynta Magaalooyinka
Intaa waxaa dheer, waxaa jira marqaatiyaal ku saabsan habka nidaaminta nidaamka dhulka ee dalalka: Argentina, Brazil, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Mexico, Paraguay, Dominican Republic, Uruguay iyo Venezuela.
Qoraalkan waxaa soo saaray "Machadka Lincoln ee Siyaasadda Dhulka", kaas oo ka yimid 1993 wuxuu leeyahay barnaamij Latin America ah iyo Kariibiyaanka taas oo barnaamijyada waxbarashada, cilmi baarista iyo daabacaadaha ay kor u qaadayaan doodaha ku saabsan arrimaha siyaasadda dhuleed.
Cusboonaysiinta 2011. Mid ka mid ah goleyaasha, waxaan maqlay Diego oo sheegaya inuu diyaar u yahay inuu ku daawado khadka tooska ah: Ka daawo fiidiyow
Waa inaad abuurtaa koonto ama waxaad ku qortaa mid hadda jirta, marmarka qaarkoodna wuxuu la halgamaa codka kumbuyuutarka, laakiin waa la heli karaa.
Haddii kale, qof ayaa u gudbiyay YouTube waxaana lagu arki karaa afar qaybood;
Ducada Sweet ee Cadastre Video_1
Ducada Sweet ee Cadastre Video_2
Ducada Sweet ee Cadastre Video_3
Ducada Sweet ee Cadastre Video_4
Post Previous«Previous Koorsada ArcMap oo dhameystiran oo Isbaanish ah
Post Next Jiilka Cusub ee OrthophotosNext »